‘संघीयता कार्यान्वयन हुने खालको बजेट ल्याऊ’ | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर ‘संघीयता कार्यान्वयन हुने खालको बजेट ल्याऊ’
काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयन हुने खालको बजेट ल्याउन अर्थविद्हरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । राजधानीमा बुधवार आयोजित एक कार्यक्रममा पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइरालाले कर्मकाण्डी र धेरै महत्त्वाकांक्षी बजेट ल्याउन नहुने बताए । सरकारले जनतासामु देखाएको आशा पूरा गर्न सरकारले प्राथमिकताका सीमा तोक्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
सरकारले अगाडि सार्ने कतिपय परियोजना राजनीतिक रूपले ठीक भए पनि सामाजिक–आर्थिक दृष्टिकोणले ठीक नहुने उनको भनाइ छ । कोइरालाले भने, ‘मुख्य कुरा हामीले स्रोतको आयतन र मुलुकको सामथ्र्य बढाउनुपर्छ ।’ संघीयता कार्यान्वयनका लागि छरितो केन्द्रीय सरकारको कल्पना गरिने बताउँदै प्रदेशले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कोइरालाले बताए । स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।
‘न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली स्थापना गरेर तल्लो तहको आकांक्षा सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसो गर्न सकियो भने ठूलो उपलब्धि हुन्छ । उग्र महत्त्वाकांक्षी परियोजनाहरू राखेर हुँदैन, बोलेका कुरा पूरा गर्ने खालका परियोजना राख्नुपर्छ ।’ केन्द्र सरकारले कठोरताका साथ प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्नुपर्ने कोइरालाको धारणा छ । उत्पादकत्व बढाउनुपर्ने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ लगायत आधारभूत पूर्वाधारमा जनताको पहुँच हुनुपर्ने उनले औंल्याए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले संघीयतालाई जोडदार रूपमा कार्यान्वयन गर्ने खालको बजेट आउनुपर्ने सुझाव दिए । संघीय सरकारले ठूला, प्रदेशले मझौला र स्थानीय तहले साना आयोजनाहरू हेर्नेगरी बजेट ल्याउन उनले सरकारलाई सुझाए । खर्च गर्न नसक्ने बजेट ल्याउन नहुने पनि उनको तर्क छ ।
विगतमा १ सातामा कुल बजेटको ११ प्रतिशत खर्च भएको तीतो अनुभव सुनाउँदै बजेटको कार्यान्वयनको अनुगमनमा पनि विशेष जोड दिनुपर्ने उनको धारणा छ ।
यस्तै, रकमान्तर गर्ने विषय संवेदनशील भएकाले यसतर्फ पनि सरकार सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । वर्तमान सरकारलाई समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको दिशा समात्ने अवसर भएकोले नेतृत्वले उक्त अवसर गुमाउन नहुने पनि क्षेत्रीले बताए ।
अर्थविद् डा. चन्द्रकान्त पौडेलले योजना आयोगको १५ औं पञ्चवर्षीय योजनासँग मेल खाने हिसाबले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट आउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘अहिले २ तिहाइ बहुमतको स्थायी सरकार छ । संस्थागत सुधारहरू देखा परेका छन् । भर्खरै उत्साहजनक लगानी सम्मेलन भएको छ ।’ तर, ‘पपुलिस्ट’ र महत्त्वाकांक्षी बजेट ल्याउन नहुने उनको सुझाव छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदरको कुरा उल्लेख भएको बताउँदै उनले यो राम्रो पक्ष भएको जिकीर गरे । मुलुकको व्यापारघाटालाई सम्बोधन गर्नेगरी बजेट आउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
१० जेष्ठ २०७६, शुक्रबार १६:२०
१० जेष्ठ २०७६, शुक्रबार ०६:५५
१० जेष्ठ २०७६, शुक्रबार ०६:४१
१० जेष्ठ २०७६, शुक्रबार ०५:५६